MM Ingilizii osoo Maakroon waliin haasa'aa jiranu maaliif miila minjaalatti ol baafatan? - BBC News Afaan Oromoo
MM Ingilizii osoo Maakroon waliin haasa'aa jiranu maaliif miila minjaalatti ol baafatan?
Goodayyaa suuraa Mr Joonsan osoo Prezidaantii Maakroon waliin Masaraatti walgahiirra jiranu miila minjaalarra kaa'awwatan
Ministirri Mummee Ingiliz Booriis Joonsan osoo pirezidaantii Faransaayi Imaanu'eel Maakroon waliin mari'ataa jiranuu mila finjaalarra kaa'atan jedhamuun ijjoo dubbii tibbanaa ta'aniiru.
Ministirri Mummee Inglizii haaraan Booriis Joonsan erga aangootti dhufanii baayyee dhihoodha.
Lammiileen biyyattii tokko tokkoos nama kana Donaald Tiraampi; prezidaantii Ameerikaa waliin walfakkeessu.
Gara aangootti erga dhufanii booda ammo Chaanisilara Jarmaniin wal arganiiru. Achiin ammoo Paariis turan. Yeroo sanatti eegaa osoo pirezidaantii Faransaayi Imaanu'el Maakiroon waliin taa'anii haasa'anu, Booriis milasaanii ol kaasuun kan fiingaala giingoo tokko yaabbattan.
Pireezidantiin Faransaay Maakroon Itoophiyaa jiru
Suuraan gocha isaanii kana mullisu midiyaa irra naannawu eegale.
Gocha kanaanis Booriis waan aanga'aana biyya tokkootiif hinmadaallee raawwataniiru jedhamuun qeeqamaniiru.
Dhuggaatti kan ta'e maal ture garuu?
Mr Boriis gocha sana daiiqaa musaaraaf kan raawwatan qoosaa Maakroon itti himaa turan irraa ka'uun akka ta'ee ragaaleen ni mullisu.
''Minjaalli kun dur akka miila irratti fanifachuufis tajaajileera'' jedhuun itti himan Maakroon Booriisiitti. Yeroo sanatti ture Booriis ''Ahaa akkasii!'' jechuun qoosaaf milasaanii finjaalarra kan baasan.
Kanas ta'u garuu namoonni baayyeen gocha Boriis kanaan kan garmalee aaran, karaa tiwiitaraatiin ''Ministirri muummee kun barnoota naamusaa hinbarannee'' jedhaniiru.
Lammiin Faransaay kan biraa ammo ''Giiftiin biyyattii kana yoo agartu maaltu itti dhagahama laata?'' jechuun barreessaniiru.
Ministirri Mummee Inglizii duraanii Tonii Bileeriif nama dhihoo kan turan Alaastar Kaampeer gama isaanitiin, ''Gocha qaamitii. Booriis aanga'oota Jarmaniifi kan Faransaayin wal arguuf daandii kana hunda erga imalanii booda, gocha akkasii raawwachunsaanii qaaniidha,'' jechuun dubbachusaanii Pan gabaaseera.
''Dhimma salphaa fakkaata ta'a. Tuffiifi of tulummaa namtichaa kan mullisuudha,'' jedhan Kaampel.
Gabaasaa siyaasaa 'Sky News; Tom Raayiinar ammoo taatee kanarratti kallattii biraa kenneera, ''gochiichi qaama qoosaa waliin taasisaa turaniitti,'' jechuun.
Akkasumas midiyaalee Faransaayis dhimmicha qabanneessaa jedhaniiru.
Dubbichi akkas: ''Oggantoonni lamaan waliitti qoosaa turan. Maakroon ''finjaalli kun bakka miila irraa kaawwatan ta'un tajaajileera'' yoo jedhaman ture ture, Mr Boriis miila ol kaasuun finjaalicha irra kaawwatan.
Kanaafu dhubbicha qabbaneessa jechuu gabaasaniiru midiyaalee Faransaayii tokko tokko.
''Gonkumaa Boriis biyyattiifi ta'e Maakirooniin hin arrabsine. Duris taanaan intarneetiin waanuma hunda affarsa'' jechuun ture gaazexaan Faransaay Le Parshiyaan jedhamu tokko kan barreesse.
Boris Johnson: MM UK haaraan caasaa mootummaa isaanii ijaaruufi
Biyya Areera harree kiiloon tokko birrii 30,000 ol itti guruguramu